भूकम्प प्रतिरोधी अस्पताल निर्माण हुँदै - Karobar National Economic Daily
भूकम्प प्रतिरोधी अस्पताल निर्माण हुँदै
query_builderJanuary 17, 2017 10:27 AM supervisor_account visibility254
बिर्तामोडः १९औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहेका बेला झापाको बिर्तामोडस्थित कञ्चनजंघा अस्पतालले भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । बिर्तामोड–९ सैनिकमोडस्थित दुई बिघा क्षेत्रफलमा कञ्चनजंघा अस्पतालले अहिले १ सय शै्याको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ ।
भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा भएको छलफलमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. सीपी यादवले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने अस्पतालको भूकम्प प्रतिरोधी ‘र्याफ्ट कंक्रिटिङ (फाउन्डेसन)’को काम भइरहेको जानकारी दिए ।
अस्पतालका अर्का सञ्चालक डा. नित्यप्रसाद खनालका अनुसार ४ जना अनुभवी इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको छ । ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा गरी बन्दै गरेको झापाको पहिलो भवन कञ्चनजंघा अस्पतालको भएको इन्जिनियर नितेष कोइराला बताउँछन् ।
उनीसहित अस्पतालको तर्फबाट इन्जिनियर सपोज घिमिरे र निर्माण कम्पनीको तर्फबाट इन्जिनियरहरू प्रभात मिश्र र रामबाबु यादव प्रत्यक्ष निगरानीमा खटिएका छन् । काठमाडौंको इजी इन्फ्र प्रालिले अस्पताल निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएको छ ।
दुईवटा ब्लकमा निर्माण भइरहेको भवन २४ सय स्क्वायरफिटको हुनेछ । लिफ्ट सुविधासहितको भवन १० तलासम्म निर्माण गर्ने क्षमता भए पनि ५ तलामात्र निर्माण गरिने बताइएको छ ।